विनाशकारी हावाहुरीले हल्लाएको मनहरु बर्खा लागेपछि थप भयभित र त्रसित बन्दै ﻿(भिडियाे) « News24 : Premium News Channel
विनाशकारी हावाहुरीले हल्लाएको मनहरु बर्खा लागेपछि थप भयभित र त्रसित बन्दै ﻿(भिडियाे)
प्रकाशित मिति : Jul 01, 2019
१. विनाशकारी हावाहुरीले हल्लाएको मनहरु बर्खा लागेपछि थप भयभित र त्रसित बन्दै
हावाहुरीले हल्लाएको मनहरु अझै स्थिर बन्न सकेका छैनन् । गत जेठ २३ गते सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा आएको विनाशकारी हावाहुरीले धेरैको विचल्ली बन्यो ।
पीडितहरुको उद्दारका लागि तत्काल राहतको घोषणा गरियो । तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारद्धारा घोषित राहत अझै पनि पाउन नसक्दा पीडितहरुको पीडा झनै चहर्याउन पुगेको छ । केही संघसंस्थाले बाँडेको त्रिपाल र खाद्यान्नले भरथेग गरिरहेका उनीहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारको राहतको आशमा बस्दा बस्दै मनसुन प्रवेश गर्दा चुँडिएको मनहरु झनै विचलित र भयभित बन्न पुगेका छन् ।
स्थानीय सरकार पीडितको लगत बटुल्न व्यस्त रहँदा प्रदेश सरकारको कुनै चालचुल नै देखिएको छैन । वर्खा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा चुहिएको घरमा पीडितहरु कसरी बस्ने हुन के यो प्रश्नले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पोल्दैन र ?
२.स्थानीय स्तरमा पुग्दो तरकारी र फलफूल नहुँदा विषादी परीक्षणको नाममा आयात रोकिदा महंंगी बढ्यो
सरकारले विषादी परीक्षण गरेर मात्र तरकारी र फलफूल आयात गर्न आदेश जारी गरेको छ । यो स्वागतयोग्य निर्णय हो नै । तर स्थानीय अवस्था नहेरी आदेश जारी भएपछि सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लाका वासिन्दा महंगोमा तरकारी र फलफूल खरीद गर्न बाध्य छन् ।
विषादी परीक्षण थालिएपछि भारतबाट आयात हुने ठूलो परिमाणको तरकारी र फलफूलको आयात प्रभावित भएको छ । जस्ले गर्दा कैलाली र कञ्चनपुरको बजारमा तरकारी र फलफूलको अभावसंगै मूल्यमा समेत चरम वृद्धि हुँदा एक किलो तरकारी र फलफूल किन्न हिडेका उपभोक्ता एक पाउ किनेर फर्कन बाध्य बनेका छन् ।
स्थानीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति हुने गरी तरकारी र फलफूल उत्पादन नहुँदा एउटा स्वागतयोग्य निर्णयको विरोध हुन थालेको छ कैलाली र कञ्चनपुरमा यतिखेर ।
३.सत्तापक्ष र विपक्षीको जुंगाको लडाईले बजेटमाथिको छलफल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५ दिनदेखि अवरुद्ध
सत्तापक्षको चाहना हुन्छ आफ्नो चाहना र योजनाहरु हुबहु पारित हुन , विपक्षीको जोड हुन्छ हुबहु नभइ आफ्नो पनि मागलाई समेटेर संशोधनसहित पारित होस् ।
अहिले सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको चलेको जुँगाको जुहारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका बजेटमाथिको छलफल नै प्रभावित बनेको छ । बजेट विकासको द्योतक हो नै तर बजेटमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच भेदभावको बुँदाहरुले उपस्थिति पाएपछि विकासले मुर्त रुप लिन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो ।
तर नहुनु पर्ने यिनै विषयहरुले उपस्थिति पाउँदा सुदूरपश्चिम सरकारले पेश गरेको बजेटमाथिको छलफल पाँच दिनदेखि अवरुद्ध बनेको छ ।